एउटा यस्तो तेल जुन तेलबाट लक्ष्मीपुजामा दियो जलाउनाले लक्ष्मी माता खुशी हुन्छीन् ! | सुदुरपश्चिम खबर
एउटा यस्तो तेल जुन तेलबाट लक्ष्मीपुजामा दियो जलाउनाले लक्ष्मी माता खुशी हुन्छीन् !
धेरैजसो मानिस पुजाको समयमा घीउँ या सरस्युको तेलको दियो जलाउने गर्दछन् । र दिपावली पुजामा पनि यसै तरिकाले गरिन्छ तर आज हामी यस्तो तेलको बारेमा बताउनेछौँ जसलाई दिपावलीको दिनम जलाउनाले माता लक्ष्मी खुशी हुन्छीन् । हामी जुन तेलको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ । यसले कैयौँ कष्टबाट छुटकारा मिल्छ । माता लक्ष्मी प्रशन्न भई तपाईलाई धनले भरिपूर्ण गर्नेछिन् ।
दिपावलीमा माटोको दियोमा रायोको तेलमा घीउँ थपेर बाल्ने गरिन्छ, तर हामीले तेलको कुरा गरिरहेको छौ भने दिपावलीमा बत्ती बाल्नको लागि विशेष महत्त्व छ। हामी अत्तासी तेलको बारेमा कुरा गर्दैछौं जसको बत्ती दिपावलीको दिनमा बाल्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ।
भनिन्छ कि अत्तासी तेलको बत्ती जलाएर,जुन व्यक्तिमा राहु केतुको अशुभ दृश्य भएका मानिसहरू शान्त हुन्छन्। यसले राहु केतुको प्रभावलाई घटाउँछ। दीपावलीको रात माता लक्ष्मी अत्तासीको तेल बत्ती जलाउँदा खुशी हुन्छीन् र आर्थिक सं कटबाट छुटकारा दिन्छिन् भन्ने मान्यता छ । आटाको पिठोमा अत्तासीको तेल राखेर बत्ती बाल्नु धेरै शुभ हुन्छ।
यो पनि ःके तपाईं लाई थाहा छ ? मानव स्वा’स्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी तरकारी हो ःनेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपा’च्य र स्व’स्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भ’ण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वा’स्थ्यका लागि कम्ता पो’षिलो छैन । तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ ।
स्कुसका तल उल्लेखित फाइदाहरू छन् ।१. पो’षक तत्वको धनी स्कुसको सबैभन्दा ठूलो गुन भनेको यो तरकारी पोषक तत्वले धनी तरकारी हो । किनकि यसमा विभिन्न प्रकारका भि’टामिन, ख’निज, र फा’इबरहरू पाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो शरी’रको लागि अत्यावश्यक छ । जस्तै, एउटा २०० ग्रा’मको स्कुसमा निम्नलिखित पोषकतत्व पाइन्छ । क्यालोरी – ३९ कार्बाे’हाइड्रेड – ९ ग्रा’म प्रो’टिन – २ ग्राम भि’टामिन सी –२६ प्रतिशत क’पर – १२ प्रतिशत पोटा’सियम – ७ प्रतिशत म्याग्ने’सियम – ५ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ । यस्तो खाले पोषक तत्वका साथसाथै स्कुसमा कम क्या’लोरी, फ्याट, सोडि’यम र का’र्बाेहाइड्रेड हुने गर्छ ।
३. मुटुको स्वास्थ्यका लागि स्कुस धेरै खाने मान्छेमा मुटुरोगको जो’खिम कम हुने गर्छ । जस्तै, उच्च र’क्तचाप, उच्च को’लेस्ट्रोल र र’क्तप्रवाहमा पनि यसले सहयोग गर्ने गर्छ । ज’नावर र टेस्ट’ट्युबमा गरिएको अनुसन्धानले र’क्तनलीहरूलाई स्व’स्थ बनाउन मद्दत गरेको भेटिएको छ । यसले र’क्त प्रवाहमा सुधार ल्याउने एवं र’क्तचाप घ’टाउन मद्धत गर्छ । यसबाहेक स्कु’स फा’इबरको राम्रो स्रोत हो । २०० ग्राम स्कु’समा शरीरमा चाहिने कुल फा’इबरको १५ प्रतिशत आरडीआई प्राप्त गर्न सकिने बताइन्छ । फाइबर युक्त खाद्य पदार्थको उच्च सेवनले मु’टु रो’गको जोखिम घ’टाएको छ ।
८ मि’र्गाैलाको कामलाई सहज बनाउन फ्याटी लि’भर डि’जिज भनेको एउटा यस्तो स’मस्या हो जसमा अत्यधिक बोसो क’लेजो छेउमा जम्मा हुन्छ । क’लेजोमा जमेको धेरै बो’सोले यसलाई ठीकसँग काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसरी नियमित स्कुसको सेवन गर्दा क’लेजोमा बो’सो जम्ने कामलाई यसले नि’यन्त्रण गर्न सक्छ । मु’सामा गरिएको अध्ययनले पनि स्कुस खुवाएको मुसामा को’लेस्ट्रोल र फ्या’ट्टी ए’सिडको मात्रा कम पाइएको थियो ।
तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको क’लेजो स्वा’स्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ? ९ स्व’स्थ रूपमा व’जन बढाउन विभिन्न अध्ययनहरूले स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मो’टोपनाको कुनै स’मस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौ’ल घ’टाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घ’टाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ । १०. पा’चन स्वा’स्थ्यलाई सहयोग पु¥याउँछ तपाईंको पा’चन प्रणा’लीमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहायक सिद्ध खानेकुरा हो । (gnewsnepal.com बाट साभार)